ओली सरकारले जाँदा जाँदै दियो देशवासीलाई यस्तो उपहार, रुने कि हाँस्ने? - Thulo khabar
ओली सरकारले जाँदा जाँदै दियो देशवासीलाई यस्तो उपहार, रुने कि हाँस्ने?
प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा केपी शर्मा ओलीले जतिपटक राष्ट्रको नाममा सम्बोधन, भाषण र प्रेस मिट गरे, सबैमा उनको एकै दावी थियो, यो सरकार जनताको हितका लागि काम गरिरहेका छ । तर, उनको नेतृत्वको सरकारले लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेको छ । जाँदा जाँदै ओली सरकारले २० देखि २८ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको हो ।
सरकारले उक्त भाडा यातायात व्यवस्था विभागले बनाएको कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनअनुसार बढाइएको दावि गरेको थियो । अझ गत असार २७ गते तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गरिएको निर्णय गुपचुप राखिएको थियो ।
सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ र गाडीका पार्टपूर्जाको मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाएर उक्त भाडा बढाएको बताएको थियो । जस अनुसार अन्तर प्रदेश चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडादर कायम गरिएको छ ।
बढेको भाडा बुधबार असार २९ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय थियो । सरकारले यात्रुवाहक सवारीमा २८ प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेको छ । त्यस्तै पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा २० प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडा २६ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ ।